Home Wararka Kenya oo heegan gelisay ciidankeeda xili ay sadax sano ka soo wareegatay...
Kenya oo heegan gelisay ciidankeeda xili ay sadax sano ka soo wareegatay weerarkii Dusit D2
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay heegan gelisay Ciidamadeena ammaanka si ay uga hortagaan weerar weliba oo dhanka Al-Shabaab ka yimaada sida uu Warbaahinta u sheegay Afhayeenka Booliiska Bruno Shioso.
Waxa uu Afhayeenku tilmaamay in xusuusta ay ku hayaan weerarkii ugu dambeeyay ee Arbacadii ka dhacay Muqdisho ee sababay dhimashada & Dhaawaca, weeraradii kale ee Kenya ka dhacay oo ay mas’uuliyadda sheegatay Al-Shabaab.
Ciidamada ammaanka ayuu tilmaamay in feejignaan sare la geliyay inta lagu howlan yahay xusuusta dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii Dusit D2 Magaalada Nairobi oo dhacay 15kii Janaayo 2019kii maanta oo kale.
Sarkaal katirsan Hay’adaha ammaanka Kenya ayaa laga soo xigtay in Xusuusta Xukuumadda Nairobi aanay ka go’in weerarkaas ku billawday Gaari lagu soo raray Walxaha Qarxa oo lala eegtay goob muhiim ah oo ay isugu tagi jireen dad kala duwan.
Kenya waxa ay sheegtay in kooxda weerartay Dusit D2 ay wateen hub kala duwan, Bambooyinka Gacanta laga tuuro & Gaariga ay ku billaabeen weerarka oo lagu soo diyaariyay walxaha qarxa.
Xukuumadda Nairobi ayaa khasaaraha dhimashada weerarkaas ku sheegtay dhimashada 22 ruux oo ay kamid yihiin 5tii qof ee fulisay weerarka & Dhaawaca 27 kale, balse wararka ayaa sheegaya in uu intaas ka badan yahay maadaama dagaalka uu socday in ka badan 24saac.
Ehelka dadka dhibaatadu ku gaartay weerarka ayaa Dowladda Kenya ka dalbaday in dhiigga dadkooda meel loogu sheego ama la tuso dad loo ciqaabay in ay ka dambeeyay falkaas, waxa ay qaraxaas ku tilmaameen in uu badelay noloshooda.
Previous articleShacabka magaaladda Boosaaso oo qabtay nin looga baqayay inuu dilal geysto
Next articleShil gaari oo khasaare geystay oo ka dhacay magalaada Muqdisho
Abiy Axmad oo u yeeray C/raxman Ciro si uu qeyb uga noqdo heshiiska Somaliland iyo Itoobiya
Siyaasiyiinta Somaliland oo qaadacay doorashada, fashilkana ku eedeeyay RW Rooble
Koox hubeysan oo dad ku leysay suuq ku yaalla magaalada labaad...
Ciidamada Puntland oo howlgalo gaar ah ka fuliyay gobolka Bari !!